के यो देशमा साँच्चै न्याय मरिसकेको हो? : वर्षा सिवाकोटी - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ २४, सोमबार १४:३५
देशमा महिला हिंसा बलात्कार हत्या जस्ता क्रियाकलाप बढदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै के यो देशमा साँच्चै नै न्याय मरिसकेको हो? भनेर सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखिकी छिन।
अहिले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक दुई घटनाले त्यस्तै देखाउँछन्। आफ्नै बुबा समानका ससुराबाट यौन उत्पिडन व्यहोरेर शंकाष्पद मृत्युवरण गरेकी सविता भण्डारी र राउटे युवती बलात्कृत भएका घटनाले हाम्रो समाजको विकृत पक्षलाई उजागर गर्छन्।
न्याय दिने निकाय किन यस्ता घटनामा क्वीक एक्सनमा उत्रदैनन्?? यस्तो कारूणिक घटनालाई मसला बनाएर युट्युबरहरू संवेदनशील विषयमा चर्तिकला देखाइरहेका छन्। राज्यको न्याय प्रशासन भन्दा युट्युबरहरूको अपरेसन प्रभावकारी हुनु भनेको न्याय मर्नु नै हो भनेर प्रश्न गरेकी छिन
५० दिनको लकडाउनपछि खुल्यो नयाँदिल्ली